Monday June 24, 2019 - 10:37:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraro abaabulan ku qaaday qeybo kamid ah gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellaha hoose, halkaas oo ay ku beegsadeen ciidamada maamullada Koonfur-galbeed iyo Jubbaland.
Dhanka Jubbooyinka, dagaalyahanno aad u hubeysan oo katirsan Al-Shabaab ayaa weeraray isbaaro ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Jubbaland, taas oo ku taalla inta u dhexeysa Baar-sanguuni iyo Buula gaduud.
Isbaarada la weeraray waxay ku taallaa deegaanka Wirkoy, waxaana goobta ka dhacay dagaal kooban, kadibna ciidamada Jubbaland ayaa cararay.
Lama oga khasaaraha gaaraya iyo inta uu la egyahay, waxaana muda kadib goobta isaga tagay ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dhinac kale, ciidamada Xarakada Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha hoose.
Weerar qarax loo adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhiga degmada Wallaweyn oo ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan kuwa Koonfur-galbeed.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab waxay sii xoojiyeen weerarada ay la beegsanayaan ciidamada dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo Shisheeyaha duulaanka ku jooga Soomaaliya.